यसरी बनाउनुहोस् केसलाई मुलायम ,चम्किलो र बलियो
सबै महिलाहरुलाई आफ्नो केश मुलायम र चम्किलो बनाउने रहर हुन्छ । तर आफुले भने जस्तो केस नभएर धेरै महिलाहरुले निकै ठुलो समस्या भोग्नु परेको छ । विभिन्न कम्पनीको सेम्पो, तेल, कन्डिसनर प्रयोग गर्दा समेत केसको समस्याबाट मुक्ति पाउने निकै गारो परिरहेको अवश्था छ ।
सुत्नेबेला यस्ता खानेकुरा नखानुहोस्
सुत्नेबेलामा यस्ता खानेकुरा कहिल्यै नखानुहोस् स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ ।
चकलेटः चकलेटमा सुगर र फ्याटको मात्रा बढी हुन्छ । विशेषगरी बच्चाहरुले चक्लेट जुन समयमा भेटे पनि खाइदिन्छन् । जसले गर्दा बच्चाको दाँत बिग्रीन्छ, एसिडिटी बढाउँछ र निद्राको समस्या आउन सक्छ । त्यसैले राति सुत्नुअघि चकलेट....
बर्षातमा मेकअप यसरी गर्नुहोस्
बर्षातमा मेकअप बिग्रने सम्भावना बढी रहन्छ । यस समस्याबाट छुटकारा पाउन सबैभन्दा पहिला अनुहारलाई राम्ररी धुने । त्यसपछि बरफको एउटा टुक्रा पातलो कपडामा बेरेर अनुहारमा ५ देखि १० मिनेटसम्म रगड्ने । यसो गर्दा अनुहारमा पसिना आउँदैन र मेकअप लामो समयसम्म टिकिरहन्छ।
बरफको टुक्राले मसाज....
१. बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा एक–डेढ गिलास पानी पिउनाले वजन घटाउनका साथै दिमागमा पर्याप्त उर्जा दिन्छ । जसका कारण दिनभर सक्रीय हुन सहयोग मिल्छ ।
२. चिया वा कफी पिउनुभन्दा अगाडि एक गिलास पानी पिउनाले एसिडको असरलाई नियन्त्रण गर्छ ।
सर्पले टोकेमा यस्तो घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
वर्षा सुरु भएलगत्तै सर्प बाहिर निस्कन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्पदंशको घटनामा पनि वृद्धि भएको छ । सर्पको विष तीन प्रकारका हुन्छ । यसमा हिमोटोक्सिक, न्यूरोटक्सिक र मायोटक्सिक समावेश छन् ।
हिमोटोक्सिकः यसले रक्त कोशिकामा आक्रमण गर्दछ । शरिरमा थुप्रै स्थानबाट रक्तश्रावको लक्षण र....
आँप खानु लाभदायक, के छन् त फाइदा ?
यो समय आँपको सिजन हो । फलहरुको राजा मानिने आँपमा प्रशस्त मात्रामा भिटामित पाइन्छ । त्यसका साथै भिटामिन सी का साथै कपर, जिंक, पोटाशियम, मिनरल्स पाइन्छ । यसले हाम्रो शरीरलाई निकै फाइदा गर्छ । आँप खादा हामीलाई के के फाइदा हुन्छन त ?
माछा खाँदा हुने फाइदाहरु यस्ता छन्
मासुको परिकार खाँदा शरिरलाई असर गर्ने भएकाले शाहाकारी खानालाई स्वस्थ्यको हिसाबले राम्रो भन्ने मानसिकता धेरैजसो मानिसहरुमा भएको पाइन्छ । तर माछाको कुरा गर्ने हो भने यसलाई धेरै नै लाभदायक भएको चिकित्सकहरुको भनाई रहेको छ । माछा खाँदा हुने फाइदाहरु यस्ता छन् :